PressReader - Ilanga langeSonto: 2017-11-12 - EZESIMANJE:
Ilanga langeSonto - 2017-11-12 - Izindaba - THANDI ZONDI
ISIKHATHI samaholide kazibandlela (December) sesiseMome. Lesi yisikhathi esimnandi kodwa esingalethi intokozo kubo bonke abantu njengoba sazi ukuthi sivela emindenini engafani. Yilowo nalowo mndeni unotwayi wawo kodwa ngesinye isikhathi ongeke ulubone uma ungumuntu wangaphandle.
Kunabantu abake bafise sengathi isikhathi samaholide bangasichitha kwenye indawo, bangayi emakhaya ngoba bebalekela izingxabano eziba khona emndenini, ikakhulukazi lapho kuhlangenwe.
Abanye baba nomthwalo wokuthi kufanele basebenze ngokweqile ukujabulisa abanye - imvamisa omakoti yibo ababhekana nesimo sokuba bazithole betatazela kusukela ekuseni lize liyoshona.
Bazi kahle omakoti ukuthi uma kuhlangene imindeni basuke bebhekwe ngamehlo abomvu, ikakhulukazi ngomamezala.
Phela umamezala ufuna ukubona ukuthi indodana yakhe yakhetha kahle yini. Lokhu ukubona ngokuthi umakoti atatazele ebaleni, agqigqizele namabhodwe ekhishini, atatazele kube njeya. Kanti ngaphezu kwalokho nabazukulu (izingane zakhe) kumele babonakale ukuthi bafundisekile futhi banenhlonipho.
Kwabanye omalokazana le mpilo iba nzima kwazise sebejwayele impilo nokwenza izinto ngendlela yasedolobheni. Uma sekungamaholide kudingeka bashintshe okuningi ukuze babu- keke kahle emzini, bathandwe, kubonakale ukuthi ngomakoti bangempela, akulahlwanga nje izinkomo zelobolo.
Umndeni uwodwa nawo unezinkinga zawo ezahlukene
Kumele sikhumbule ukuthi la ngaphandle kakuphunyelelwa kanye kanye. Cishe iningi labantu ngalesi sikhathi lifikelwa yimizwa ehlukene uma sekumele libhekise amabombo emakhaya.
Yize nisuke niphuma esiswini somuntu oyedwa kodwa lokho kakusho ukuthi nizophumelela nonke ekhaya.
Ngesikhathi samaholide uma sekuxoxwa ekhaya, abantu bekhuluma ngezinto abafisa ukuzenza noma asebezenzile, uma ungabanga nenhlanhla yokuphumelela njengalaba ozalwa nabo, lesi sikhathi kungaba yisikhathi esinzima ngoba uhlala ngezinqe obala okwesele.
Yize abanye ozalwa nabo bengeke bakutshengise ukuthi baphila kangconywana kunawe kodwa uba nesazela sokuthi kawukafiki ezingeni labo lokuphumelela. Kwesinye isikhathi kuba ukuxabana okujwayelekile kwezelamani kwazise nisuke seningasajwayele ukuhlala ngaphansi kophahla olulodwa.
Imikhuba abanye ababeyenza besakhula uthola ukuthi basaqhubeka nayo ngisho sebekhulile nokuyinto egcina iyisinengiso kwabanye.
Kanti abanye ngenxa yokuthi kusuke kukhona lapho abathanda ukushaya umthetho ekhaya baba nenkinga lapho kuhlangene umndeni sekumele bathobele umthetho wabanye. Yilowo nalowo ufuna kulalelwe yena ngoba kujwayele ukwenzeka ngaleyo ndlela emzini wakhe kanti kwesinye isikhathi usuke ezibona engcono kakhulu ngakwezezimali bese efuna ukuba kulalelwe yena.
Uma kungenjalo kuba nomalume noma umalumekazi okuthi uma sekuhleliwe kahle athande ukuvusa izinto ezindala.
Omunye umuzwa esethi: “Kungabe nami ngishayela uhlobo oluphambili lwemoto ukuba layikhaya akukhethwanga iphela emasini kwafundiswa unozibanibani.”
Uma sekuphume lawa magama ngisho kungabe ukudla bekumnandi kanjani kodwa kuphenduka kube muncu. Yilowo nalowo afise indlela yokunyamalala ukuze kuzanywe ukugwema isimo esishubile esingase sisuke.
Akugcini lapho ngisho, ukudla okumele kudliwe kuyaxatshanelwa. Khumbula ukuthi emindenini yethu thina abampisholo injabulo yethu ihambisana nokubusa kudliwe, kufinywe ngendololwane. Uma sijabule kumele kube nokudla okumnandi neziphuzo ezithile zokwehlisa.
Konke lokhu kwenziwa ngemali, uma sekumele kuhlanganiswe amasenti kuhanjwe kuyothengwa ukudla okuzokwazi ukuba kuhlale kuze kuphele amaholide, uthola ukuthi kukhona abazoshaya amakhala bangafuni ukuphosa esivivaneni. Uthole ukuthi kukhona umuntu odlayo nje futhi onezingane kodwa ongafuni ukufaka ngisho isenti elimnyama lapho kuhlanganiswa imali yokuyothenga ukudla.
Okunye okuye kucike abanye uma kuhlangene imindeni wukubuzwa imibuzo ecoba amathambo njengokuthi uphi umkhwenyana noma umakoti. Le nhlobo yemibuzo ikwenza ufise ukuzivalela ekhosombeni lakho wedwa ngoba mhlawumbe usuke ungakabi nayo impendulo eqondile.
* Uthobani Buthelezi, osebenzela ethekwini, uthi kayikho into ayithokozela njengokuya ekhaya uma kungamaholide kodwa imibuzo ayithola kunina imcoba amathambo.
“Sekuyinto engiyaziyo ukuthi minyaka yonke umama ungibuza ukuthi umthola nini umzukulu. Lo mbuzo usungicoba amathambo. Ngiyazi ukuthi sengikhulile kodwa iqiniso lithi ngeke ngikwazi ukuba nomntwana ngenxa yesimo sezimali, kuningi kakhulu okudinga umholo wami,” kusho yena.
* Usmangele Ntshangase usebenzela egoli kodwa uma kungamaholide uyehla aye Olundi ekhaya. Uthi uhlezi esithokozela isikhathi asichitha nomndeni wakhe. Inkinga uthi iqala uma izingane zakhe sezenza okwehlukile kulezi azifica ekhaya.
“Zifunda (ezami) ezikoleni zezinhlotshana - kuyenzeka kwesinye isikhathi zikhulume isingisi uma zizodwa. Uma zike zezwakala kuba sengathi yiphutha lami, abadala babuya bathethise mina. Iyona kuphela into engicika uma ngisekhaya, kuvele kubukeke sengathi ngizenza ngcono,” kuchaza yena.
*Uzinzi Mkhize uthi yonke imindeni inezinto zayo kodwa yize kunjalo uthi kuyajabulisa ukuchitha isikhathi samaholide nomndeni.
“Thina sihlezi sixabana ekhaya, sekwaba yizinto zakhona. Ngivele ngiphumele emnyango ngiyozidlalela nabantwana. Abanye abakhulumisani, kwesinye isikhathi kubangwa izinto zomndeni ezindala ongazi ukuthi zazingakhulunywa ngani zedlule ngaleso sikhathi,” kuchaza yena.